कलेजमा सरको हल्लाले साथीको गफै सुन्न पाइँदैन - ट्विटर - साप्ताहिक
कलेजमा सरको हल्लाले साथीको गफै सुन्न पाइँदैन
गाउँमा अल्छी प्रतियोगिता थियो, म जाँदै गइनँ । आयोजकले प्रथम पुरस्कार घरमै ल्याइदिएछन् ।
कलेज नि के जानु ? सरको हल्लाले साथीको गफै सुन्न पाइँदैन ।
अहिले जिन्दगीको यस्तो मोडमा उभिएको छु— यदि मेरो पर्स हरायो र कसैले भेट्यो भने म भन्दा बढी दु:खी मेरो पर्स भेट्ने मानिस हुनेछ ।
तिम्रो दुई–चार चोटि हाई–हेल्लो नआई रिप्लाई नगर्ने बानी । मेरो एक चोटि रिप्लाई नगरेपछि दोस्रो पटक नबोलाउने बानी । मिलन होस् त कसरी ?
प्रतीक्षा त्यही दिनको छ, आफू स्वयं आफ्नो परिचय बन्न सकूँ ।
दु:खी हुनुस् कुनै परवाह छैन, तर दु:ख दिने मानिस कहिल्यै नहुनुहोस् ।
इज्जत कमाउन पैसा लगाउनु तर पैसा कमाउन इज्जतमा कहिल्यै दाग नलगाउनु ।
एकनाथ ढकालले माधव नेपाललाई फसाए, माधव नेपालले ओलीलाई फसाए अनि ओलीले पार्टी र राष्ट्रलाई नै फसाए, वास्तविकता यही हो ।
महिलाले रक्सी खाए शानका साथ खान्छन्, लुकी–लुकी भट्टीमा गएर खाने हो र ?
ब्वाइफ्रेन्डको नामको ट्याटु लेखुम् भनेको कुन चाहिंको नामको लेख्ने होला कन्फ्यूज भएकी छु ।
बुद्धिजीवी नभएकोमा ढुक्क हुने दिन पनि आयो बाई । समृद्धिसँगै निरक्षर हुँ भनेर ल्याप्चे ठोक्दिने दिन पनि आउला । के थाहा, साक्षर जतिलाई सेन्टिफ्ल्याट गर्दिने उर्दी पो आउला कि †
समय बदलियो, मान्छे बदलिए तर एक सयको नोट बदलिएर १ हजार किन भएन ?
अनुहार हेर्न हुनि जस्तो नभएका हामी जस्ताले त ऐना हेर्नु पनि समयको बर्बादी मात्र हो जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई त ।
न त आस बचेको छ, न त विश्वास नै बचेको छ । रित्तो नै हुनुपर्छ तिमी भन्छौ भने, लैजाऊ अलिकति जो आश बचेको छ ।
हिट्लर द डियर
साँझको बेलामा सुत्नु हुँदैन, राति कपाल कोर्न अनि नङ काट्न हुँदैन, शुक्रबार नुहाउनु हुँदैन, शनिबार कतै टाढाको यात्रा गर्नु हुँदैन, खुर्सानी हातमा दिनु हुँदैन, कुचो ठड्याएर राख्नु हुँदैन, मंगलबार कपाल काट्नु हुँदैन जस्ता कुरा पत्ता लगाउने वैज्ञानिक कुन देशका होलान् ?
जुन चिजको महत्व बढी हुन्छ, त्यसको दुरुपयोग पनि त्यति नै हुन्छ । नपत्याए पैसालाई हेर्नुस् त । भावनादेखि नियमसमेत किन्न खोज्छन् दुष्टहरू ।
हिजोआज पानी पनि तताएर पिउने गरेको छु, चिसोले होइन मनमा बसेकीलाई चिसो लाग्ने डरले ।
मंसिर सकियो भन्दै पिर मान्दै र’छन् कोही–कोही यता । हैन कुन महिनाले कसलाई पो पर्खिएको थियो र मंसिरले पर्खियोस् ।
जन्मदिनमा नगर्ने काम : म आफ्नो जन्मदिनमा केक काट्नेछैन, जन्मदिनमा मैनबत्ती निभाउनेछैन, जन्मदिनमा जोकरको जस्तो टोपी लगाउनेछैन ।
जन्मदिनमा गर्ने काम : कुनै मन्दिर जानेछु, पूजाआजा गर्नेछु, भगवान्सँग आशिर्वाद लिनेछु । मैले राम्रो काम शुरु गरें, तपाईंलाई पनि मन लागे यो काम गर्नुहोला ।
राम्रो चिजको आयु छोटो हुन्छ भन्थे, हो रहेछ । मेरो मायाको आयु नि एकदमै छोटो थियो ।
केटी भएर मुस्कुराउनु उनीहरूको अदा हो । त्यही मुस्कानलाई लभ सम्झिने केटा गधा हो ।
यो जाडोमा दिनहुँ नुहाउने मान्छे मान्छे होइनन्, भगवान् हुन् भगवान् ।
नेपालीलाई जहिले पनि पोहोरको भन्दा धेरै जाडो अहिले हुन्छ रे नि त ।
हाँस्दै गर्नुस्, मुस्कुराउँदै गर्नुस्, जिन्दगी त्यति नराम्रो पनि छैन ।
माया त सधैं कायम नै रहन्छ, बस माया गर्नेहरू मात्र टुट्छन् ।
हैन, दिलमा बस्ने केटीहरूले धेरै नै फोहोर गर्न थाले कि क्या हो ? मेरो जीउ त डङडङ गन्हाएर आयो त भित्रैदेखि ।
पीएम हुँ भन्नेबित्तिकै बेला न कुबेला पोल–पोलमा झुन्डिन मिल्छ ? कि राजा नभएको देशमा यस्तै हुन्छ ?
हरेक पाँच–पाँच मिनेटको फरकमा एउटा रुन्चे ट्विट, अर्को लभ ट्विट, अर्को हँसी–मजाकवाला ट्विट, फेरि रुन्चे ट्विट लेख्ने मानिस देख्दा चैं कति अटेन्सन चाहिएको होला भनेर ट्वाँ नै पर्छु भन्या । कति भ्याउने हुन् क्या ?
सम्बन्ध धेरै बनाउनुभन्दा पनि बनिसकेको सम्बन्धमा भरोसा सिर्जना गर्नु जरुरी हुन्छ, किनभने यहाँ सम्बन्धले भरोसा होइन भरोसाले सम्बन्धलाई टिकाएको हुन्छ ।
प्रेम कविता सुन्न र सुनाउन